LIVE amin’ny 25 Aogositra (amin’ny teny espaniola): Ahoana ny nampielezan’ny COVID-19 ny hetsi-panoherana any Cuba, Guatemala ary Colombia · Global Voices teny Malagasy
Halefa mivantana amin'ny YouTube ny fotoana
Voadika ny 23 Aogositra 2021 5:00 GMT
Ny heverina ho singa iraisan'ny olompirenena amin'ireo firenena ireo hitroatra dia ny fitantanana ratsy ny valan'aretina COVID-19.
Tamin'ny volana jolay, vahoaka tao Cuba no naneho, tao anatin'ny andiam-pihetsiketsehana tsy mbola nisy hatrizay, ny loniloniny amin'ny fahavitsian'ny sakafo sy ny fanafody. Izay no fisehon'ny trangan'hasosorana mihamitombo manoloana ny fitantanan'ny governemanta ny valan'aretina, ankoatra ny singa ivelany tahaka ny fanasazian'i Etazonia sy ny fitakiana isian'ny fahalalahana ara-politika bebe kokoa ao amin'ny nosy. Manao ahoana moa izany ny toe-draharaha amin'izao fotoana izao, mihoatra ny fisarahana ara-potokevitra?
Ao Colombia, nihatra hatramin'ny volana mey lasa teo ny fitokonana nanerana ny firenena, notarihan'ny sokajim-piarahamonina isankarazany. Nalaza haingana tao amin'ny tambajotra sosialy noho ny tatitra herisetran'ny polisy tafahoatra ny hetsi-panoherana notarihan'ny olompirenena Kolombiana mihamahantra manohitra ny fitomboan'ny hetra. Tsy anaovana lohateny amin'ny vaovao iraisampirenena intsony ny fitokonana kolombiana, na dia mbola mandeha aza izany amin'izao fotoana. Inona no mitranga any Colombia amin'izao fotoana izao?
Anisan'ireo ambany indrindra ny fanaovam-bakisiny ao amin'ity ilabolantany ity i Guatemala, saingy tsy ny vahoaka no tsy te-hanao vakisiny. Nampihozongozona ity firenena Amerikana Afovoany izay manana governemanta voampanga ho tsy mahay mitantana ny valan'aretina sy tsy miatrika ny fiantraika mandravarava ny fikorontanan'ny toetrandro, ao anatin'ny lazaina ho fisian'ny kolikoly, ny fihetsiketsehana notarihan'ny vondron'ny vazimba teratany (indizeny). Nahoana isika no tsy maheno izay mitranga ao Guatemala amin'izao fotoana?
Miaraha aminay mba hahafantatra bebe kokoa ny antony mahatonga ny vahoaka amin'ireo firenena ireo hitsangana hiaro ny ain-dry zareo amin'ny 25 aogositra amin'ny 15:00 GMT (enina ora hariva eto Madagasikara), amin'ny toko manaraka ao anatin'ny andian'ny webinar mandeha aterineto mivantana Global Voices Insights. Hotontosaina amin'ny teny espaniola ny fotoana ary maimaim-poana sy misokatra ho an'ny daholobe. Misorata anarana etsy ambany raha te-hahazo ny fampahatsiahivana amin'ity fandaharana ity:
[ Misorata anarana eto ]
[ Rohy YouTube ]
Hahitana ireo mpandray anjara manaraka ireto ny fotoana:
Avy ao Guatemala, Paulina González, Fahefana ara-drazana Maya Tz´útujil sady Mpitarika voalohany amin'ny Filankevitry ny zokiolona sy mpitarika fahatelo amin'ny Ajpop Tinaamit, avy amin'ny departemantan'i Sololá.
Avy ao Colombia, Diego Armando Hernández Álvarez, mpianatra Fanaovan-gazety-Fifandraisana Sosialy, mpikatroka ara-tsosialy, sy mpiara-manorina ny Des-Igual, seha-pifandraisana mirazotra (alternative).
Avy ao Cuba, Lynn Cruz, mpiantsehatra, mpanatontosa, mpilalao sady talen'ny Teatro Kairós, izay nitarihany ny tantara an-tsehatra El Regreso (2011), Los Enemigos del Pueblo (2017), Patriotismo 36-77 (2018). Amin'izao fotoana izy eoam-pokarakarana ny fanatontosana ny Sala-R. Tamin'ny taona 2018 izy nosakanana tsy hahazo miasa amin'ny maha-mpiantsehatra azy ao anatin'ny andrim-panjakana kiobana noho ny heviny ara-politika.
Manantena izahay hahita anareo hanatevin-daharana amin'ny alarobia 25 aogositra amin'ny 15h GMT (tsindrio eto hamadihana azy ho amin'ny ora ao amin'ny misy anao).